मृ,गौला फेर्न लागेका ओलीले राज्यकोषबाट लिए १७ करोड उपचार खर्च! …हेर्नुहोस!
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा चाँडै मृ,गौला फेर्न लागेको बताए। बागमती प्रदेशस्तरीय अ,गुवा कार्यकर्ताको प्र,शिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मि,र्गौला प्र,त्यारोपणका लागि पाँच दिन अ,स्पताल बस्ने र छैठौं दिन निवासमा आएर काम गर्ने बताए।
‘छिट्टै मिर्गौला प्र,त्यारोपण गर्दैछु। पाँच दिन अ,स्पताल बस्छु। छैठौं दिनदेखि काम गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अझै १०-१५ वर्ष मलाई केही हुन्न।’ १२ वर्षअघि ओलीले पहिलो पटक मिर्गौला प्र,त्यारोपण गरेका थिए। पछिल्लो समय उनको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको छ। अहिले उनी नियमित रूपमा डा,यलासिस गरिरहेका छन्।
अब चाँडै उनको मृ,गौला प्र,त्यारोपण हुनेछ। तर, लामो समय देखि रोगको शिकार बनेका ओलीले अहिलेसम्म राज्य कोषबाट कति उ,पचार खर्च लिए त? धेरैलाई चासो लाग्न सक्छ। केहीसमय अघि पूर्वसचिव भीम उपाध्ययले फेसबुकमा वालमा राखेको तथ्यांक अनुसार भने ओलीले हालसम्म १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार ९ सय २ रुपैयाँ सरकारी कोषबाट लिएका छन्।
यद्यपी पछिल्लो चार बर्ष यता ओलीले थप के कति रकम नेपाल राज्यकोषबाट उ,पचार खर्च लिए, त्यो भने सार्वजनिक भएको छैन। गत भदौमा सिंगापुरमा उ,पचार गराउन गएका ओलीको खर्च विवरण र स्रोत अझै खुलेको छ। सो विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेपनि त्यो बेलाको खर्च विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको हो। धेरैले ओलीको उ,पचार खर्च यति समुहले व्यहोरेको समेत बताउँदै आएका छन्।
यस्तो छ ओलीले ०५४ देखि ०७२ सम्म राज्यकोषबाट लिएको
उपचार खर्चको विवरणः
– २०५४ असार १५ गते २० लाख २५ हजार।
– २०५९ माघ २७ गते १३ लाख ५८ हजार ५ सय।
– २०६४ साउन ६ गते २७ लाख १२ हजार १ सय।
– २०६८ भदौ १३ गते ३५ लाख ७३ हजार।
– २०७१ कार्तिक १७ गते ९ करोड २२ लाख १३ हजार।
– २०७१ चैत ५ गते ३७ लाख ७३ हजार।
– २०७२ कार्तिक ९ गते २ करोड १२ लाख ३ सय।
– २०७२ फागुन ३ गते ४ करोड ९८ लाख १३ हजार २ रुपैयाँ।
यसरी ओलीले ०७२ फागुन सम्ममा जम्मा १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार ९ सय २ रुपैयाँ राज्यकोषबाट उ,पचार खर्च लिएका छन्।
पुरुषका लागि बन्यो गर्भनि’रोधक सुई, एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने
नर्भिक अस्पतालले भन्यो–‘निशा घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षित सुधार भएन’
तपाइले बट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता यस्ता रो’गको लागि अ-चुक ओ-खती हो बट्टाईको अण्डा !
पिपलको पातबाट धेरै राे’गहरुकाे यसरी औ-षधि बनाउन सकिन्छ , सबैले जानीराखौं
पानीपुरीमा पिसाब मिसाएको घ’टना सार्वजनिक
कि’ड्नी र मु’टु रो’गीका लागी अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ सिस्नु , यस्ता छन् अरु फाइदा जानीराखौं !